Thursday April 26, 2018 - 10:46:24 in Wararka by
Wadanka Suuriya markale waxaa ka bilaawday barakicinta qasabka ah ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta sunniga ah ee duullaanka adag ka wajahaya cadawga jinsiyadaha kala duwan leh.
Wararka ka imaanaya Mandiqada Qalamuunta Bari ee dhacda baadiyaha caasimada Dimishiq ayaa sheegaya in heshiis ay gaareen qar katirsan kooxaha mucaaradka Suurya iyo Nidaamka Bishaar Al-Asad.
Kooxda Jayshul Islaam ee Taageerada ka hesha wadanka Sucuudiga ayaa heshiis la saxiixatay Nidaamka Nuseyriga ah kadib Markii uu bilaabay Duullaan uu ku doonayo inuu ku qabsado Buuraha istiraatjiga ah ee qalamuun.
Heshiiska ay kala saxiixdeen labada dhinac waxaa garwadeen ka ah dowlada Ruushka oo la filayaa inay Mandiqada ku faafiso ciidankeeda Police-ka ee sida Militaryga utababaran.
Deegaanada uu heshiiskani ka hirgalay waxaa kamid ah Ad-damiir, Ruxeybah, Naasirah, Jeyroud, Mansuurah iyo Cadhnah oo dhamaantood dhaca Mandiqada Qalamunta Bari.
Qodobada lagu heshiiyey waxaa kamid ah.
1-in la sameeyo xabad joojin dhameystiran oo dhex marta kooxda mucaradka ah isku magacawday jeyshul islam iyo nidaamka Nuseyriga ah ee Al-Asad.
2-in kooxda Mucaaradka ah ay soo wareejiso dhamaan Wixii hub culus ah oo ay heysato, kuwaas oo uu ugu yaryahay qoriga Baasuukaha loo yaqaan.
3-inay soo diiwaan galiyaan dhamaan dadka doonaya in Mandiqada laga saaro oo loo daabulo dhankaa iyo Magaalada jaraabulis
4-sidoo kale in ciidanka Police-ka Ruushka loo ogolaado inay la wareegaan xarumaha muhiimka ah ee magaalooyinka aan soo xusnay, shaqadoodana aan lacarqaladayn.
5- in lasiiyo mudo 6 bil ah dhamaan ardaydii ka qalin jabisay dugsiyada sare ee dowlada ee kadib dhacay ka qeyb qaadashada Shaqada ciidanka ee Qasabka ah si ay ugu soo biiraan Safka Nidaamka.
6-in xubnihii horey ugu shaqeyn jiray maamulka Bishar Al-Asad, balse ku biiray kooxdaan mucaaradka ah lasiiyo mudo 15 maalmood si ay isku soo dhiibaan.
Wararkii ugu danbeeyey ee kasoo baxa Mandiqada Qalamunta Bari ayaa sheegaya in kooxda Jayshul islaam ay dhaqan galisay dhamaan qodobadii heshiiska ku xusnaa, waxa ayna Nuseyriyada iyo Ruushka Kuwareejiyeen hub iyo taangiyo dagaal oo fara badan.
Kooxda Jayshul Islaam waxa ay aheyd kooxda ugu awooda badan mucaaradka Suurya, waxaana bixiya dhaqaalaha ay ku dagaal galayaan dowlada Sucudiga, marar badana waxa ay madaxdeedu kasoo muuqdeen Miisaska wadahalada sida Shirarkii Astaana, Stanbul, Riyaad iyo Switzerland.
Raga firfircoon ee soo tabiya wararka Suurya ayaa sheegaya in hubka ay kooxdani ku wareejisay nidaamka lagu dagaalami karo in kabadan 10 sano oo xiriir ah, balse kooxdaan ayaa si dhib yar ugu gacan galisay cadawga si uu qeyb kaga noqdo, Gantaalada lagu gumaadayo shacabka Musliminta Suurya.
Warbaahinta Nuseyriyada ayaa sidoo kale baaahisay sawirada Hub fara badan oo ay sheegeen in heshiiski dhex maray iyaga iyo jeyshul islaam ay kula wareegeen.
Hubka la wareejiyey waxaa kamid ahaa 37 Taangi, 48kun oo baalootooyinka Taangiga ah, 6,800 oo ah sawaariikhda Nooca loo Yaqaan Garaadka, 36 Sawaarikhda loo yaqaan ISKOOD-ka oo gaari kara 300Km, 8 Sawaariikhda loo yaqaan Kobraha ah, 42 Kun oo baalooto oo ah rasaasta madaafiicda goobta, 1400 oo ah Sawarikhda loo yaqaan KONKORIS ee Taangiyada Burburiya iyo in ka badan 40Kun oo Rasaasta Hoobiyaha noocyadiisa kala duwan ah.
Culimaa'udiin iyo Hoggaamiyaal katirsan xoogaga islaamiga Suuriya ayaa tallaabadan ay qaadeen kooxaha mucaaradka ah ku tilmaamay khiyaano iyo isdhiibid aan wax marmarsiimo ah laheyn.
Kooxdan isku magacawday Jeyshul Islaam, 7sano ee lasoo dhaafay Saaxada dagaalka suurya kama aysan muuqan ciidankeeda iyo hubkaan faraha badan leh ee cadawga ay u gacan galiyeen, kaliyana waxa ay kaga faaideysan jireen dhoolatusyo waaweyn oo ay ku qabanyeen Magaalooyinki ay heystiin iyo Dagaalo ay kala hor imaanayeen kooxaha Mujaahidiinta ah ee doonayey inay cagta Mariyaan xeryaha Ciidanka Nuseyriyada ee ku hareereysan magaalada Caasimada ah ee Dimishiq.
Dadka Falanqeeya arimaha suurya ayaa ku tilmaamay kooxdan isku magacawdan jeyshul islaam inay ilaalo u ahayd nidaamka Bishaar Al-Asad eek a arimiya Magalada Dimishiq, Balse Markii ay si sahlan hubka ugu wareejisay markii dantii lahaa laga gaaray.